Sekufungidzira kwakaita Dennis Chung, murume weHonda muToronto, Honda Europe paakazivisa nhau kutanga kwaZvita, mota nyowani itsva uye yakagadziridzwa yevanhu vaviri yemota inopinda mumusika weUS. Muchokwadi, Honda yakati CRF ndiyo inotengesa zvakanyanya mitambo miviri muindastiri yemidhudhudhu. Iine itsva C ...
The chinzvimbo quo China kuti goridhe Fittings indasitiri
Fittings dzegoridhe dzinoita basa rakakosha mukufambisa kwesimba uye shanduko mainjiniya.Product mhando hachisi chehukama chete nekuchengetedzeka kushanda kwesimba grid, asi zvakare zvine chekuita nekuchengetedzeka kwepfuma yako wega. yemagetsi S ...
Maindasitiri Ekuvandudza Tarisiro
1.1 Tsanangudzo: Zvigadzirwa zvesimbi ndezvishongedzo zvesimbi zvinobatanidza uye zvinobatanidza marudzi ese emidziyo, michina yekufambisa, mitoro yemagetsi uye inoita rimwe basa rekudzivirira mune yemagetsi system. Ivo vanoita basa rakakosha mukufambisa kwesimba uye shanduko mainjiniya.
China yepamusorosoro emakambani
Xinwom ibhizimusi repamusoro-soro rinotarisa kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemagetsi emagetsi. Sevashandi vepasirose yenyika vane hunyanzvi hwehunyanzvi uye simba reR&D, xinwom yakazivikanwa se "bhizinesi repamusoro-soro" nehurumende mu2019. Kubva ...